VELIRANON’NY MPANOHITRA : « Maloto sy anjakan’ny kolikoly tanteraka ireo andrimpanjaka »
Tsy misy intsony ny mangarahara eto amin’ny firenena, maloto sy anjakan’ny kolikoly tanteraka ireo andrimpanjaka. 18 mai 2017
Tsy misy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny demokrasia. Raha fehezina dia tsy mety ny fitantanana ny firenena, tsy mahomby amin’ny fitondrana an’i Madagasikara ny mpitondra mijoro amin’izao fotoana izao. Nanakoako io, omaly, teny Mahamasina nandritra ny fanambaràna nataon’ireo antoko mitsangana ho mpanohitra nahitana ireo mpiara-dia amin’ny profesora Zafy Albert izay notarihin-dRamatoa Ravololomanana Lalatiana.
Ity farany no nitondra ny teny ary nanitsy ihany koa tamin’ny ankapobeny mahakasika ny foto-kevitra izay tena ijoroan’ireo mpanohitra ankehitriny. “Diso ny filazana fa efa misy ny fanoherana eto Madagasikara. Tsy mbola misy velively ny fanoherana eto amintsika fa ireo mitonona ho mpanohitra no maro an’isa”, hoy ny fanazavana noentiny. Anisan’ireo efa mijoro ho mpiara-dia amin’ny mpanohitra ny ankolafy tarihin’ny profesora Zafy Albert ary izy ireo ihany koa ny lohandohan’ny mpisorona tamin’ny famolavolana ilay Veliranon’ny mpanohitra na ny “charte de l’opposition”. Andininy maro izay voalaza fa tsy voahajan’ny fitondrana tarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no voarakitra ao anatin’izany. Isan’izany ny fampihavanam-pirenena, ny demokrasia izay voahosihosy tanteraka amin’izao fotoana izao, ny fitondrana tsara tantana ary ny hasin’ireo andrim-panjakana isan-tokony.
Sonia an’arivony teto Antananarivo sy tany amin’ireo Faritra maro no voaangona mba hampanan-kery an’io Veliranon’ny mpanohitra io. Noantitranterin-dRavololomanana Lalatiana fa tsy fitadiavana seza velively no anton’ny itsanganan’izy ireo ho mpanohitra fa ny hanorenana ifotony an’i Madagasikara. Izany no tsy isarahan’izy ireo amin’ny Profesora Zafy satria ity farany dia mbola mivohy hatreny ny fampihavanam-pirenena izay vahaolana lehibe ahatongavana eo amin’io fanorenana ifotony ny Firenena io.
Miantso ireo izay tena vonona hanohitra
Ny volana jona tamin’ny taona 2014 dia efa nisy ny fihaonam-ben’ireo mpanohitra teto Antananarivo. Lohahevitra novelabelarina tamin’izany ny hoe “Maninona no tsy ekena ny fomba fitantanan’ny Filoham-pirenena ny firenena”. Nandritra io fikaonan-doha io ihany koa no nipoiran’ny hevitra hanangana ny Veliranon’ny mpanohitra, ka tanjona tao anatin’izany ny mba hananan’ireo rehetra milaza ho mpanohitra fomba fijery iombonana sy fanovaana ny fomba fanao politika ary indrindra ny firaisan-kina mba hitondrana ny fampandrosoana marina. Telo taona aty aoriana, nambaran’ireo tompon’ny hevitra fa tsy tratra io tanjona io satria tsy vita mihitsy ny fananganana ny fanoherana.
Araka ny fanazavana voaray dia misy amin’ireo milaza ho mpanohitra manana tanjona fitadiavan-tseza fotsiny, ary ao ihany koa ireo nilaza ho mpanohitra rehefa voailika tao anatin’ny governemanta. Fantatra fa tsy mitovy ny fomba fijery eo amin’ny tanjona hotratrarina ka teo no nahatonga ny fisaraham-bazana. “Mila ambolena ny fanoherana fa tsy teraka ho azy”, hoy hatrany ny fanambaràna voaray.
Manoloana an’io dia miantso an’ireo olona na antoko politika vonona hampitovy fomba fijery amin’izy ireo ireto ekipa namolavola ny Veliranon’ny fanoherana ireto mba hanatratra ny tanjona iray ary vonona ihany koa izy ireo ny hifampiresaka amin’ny fitadiavam-bahaolana hoentina hanatrarana ny vina.